【 သရျောစာ 】 “ဘကွီးကြိုငျးရဲ့ လှတျတျောမှတျတမျး” | Opinion Leaders
【 သရျောစာ 】 “ဘကွီးကြိုငျးရဲ့ လှတျတျောမှတျတမျး”
ခငျဗြားတို့ ကြုပျကိုသိကွရဲ့လား။သိတော့ သိမှာပါဗြာ။နာမညျနဲ့ မတှဲမိတာပဲနမေယျ။လှတျတျောခနျြနယျတှေ ဘာတှေ ကွညျ့တဲ့သူတှကေတော့ ကြုပျသိကွမှာပါ။
အျော..ဟုတျပါရဲ့။ကြုပျနာမညျ မိတျဆကျပေးဖို့ မနေ့တောရယျ။တျောကွာ တကြုပျကြုပျနဲ့ ပွောနလေို့ ဖစေ့ဘှတျဆိုတာမယျ တရားတှလေိုကျစှဲပွီး နာမညျကွီးနတေဲ့ ဟိုဆရာမလေး ထငျနပေါဦးမယျ။ကြုပျနာမညျ ဘကွီးကြိုငျးတဲ့ဗြ။
ငါတို့မြားလညျး လှတျတျောခနျြနယျ၊ လှတျတျောသတငျးတှေ အမွဲကွညျ့၊ အမွဲဖတျပါတယျကှယျ။ဘကြိုငျးကွီးဆိုတဲ့ နာမညျနဲ့ လှတျတျောအမတျမြား ကွားကွားဖူးပေါငျဗြာ။ဒါနဲ့ဘာလဲ .. ဘောငျးဘီဝတျအမတျတှထေဲကလားလို့တော့ မမေးလိုကျပါနဲ့။ဘကွီးကြိုငျးက ဟိရိဩတ်တပတရားနဲ့ ပွညျ့စုံပါတယျ။လှတျတျောထဲ ဘောငျးဘီမဝတျပါဘူး။
အိုဟဲ့..တမြိုးမထငျပါနဲ့။ဒီအသကျအရှယျကွီးမှ ဘောငျးဘီကွီးတကားကားနဲ့ဆို ဘကြိုငျးကွီးက ရှကျတတျလို့ပါကှဲ့။ကဲ..ဟုတျပါပွီ။ဘကွီးကြိုငျးဆိုတာကို လှတျတျောထဲ မမွငျဘူး၊ မသိဘူးကွသူမြားကို ဘကြိုငျးကွီးကပဲ မိတျဆကျပေးပါ့မယျ။ဘကွီးကြိုငျးဟာ လှတျတျောထဲမှာ အကောငျကှယျ့။ဘကွီးကြိုငျးလာပွီဆို ရောငျစုံအမတျတှအေကုနျလုံး မတျတပျရပျနကွေရတာ။ဘကွီးကြိုငျး နောကျမှာမှ လှတျတျောဥက်ကဋ်ဌက လိုကျရတာ။အောငျမယျ .. ဘကွီးကြိုငျး လှတျတျောထဲဝငျရငျလညျး သူမြားတကာ အမတျတှလေို လမျးလြှောကျဝငျရတာ မဟုတျဘူး။တဈယောကျက ထမျးသှားရတာမောငျ။ကိုငျး .. ဒီလောကျဆို ကြုပျ ဘကွီးကြိုငျးဟာ ဘယျသူဆိုတာ ခငျဗြားတို့ သိလောကျရောပေါ့။
ဒါပသေိ .. ဒီအခကျြတှကေိုကွညျ့ပွီး . ဘကွီးကြိုငျးဆိုတဲ့ ခငျဗြားကွီးက လှတျတျောထဲ တယျဇိမျကနြမေယျဆိုပွီးတော့ မတှေးကွပါနဲ့ဗြာတို့။ကြုပျမယျ တဈနေ့ တဈနေ့ လှတျတျောကွီးထဲက အခြှတျအခြျောတှကေို ထိုငျကွညျ့နရေတာ ဘယျလောကျဒုက်ခမြားတယျထငျတုနျး။သူမြားတှကေ ဒီဒုက်ခကွီးခံရတာကို ဆယျသိနျးစားရတယျဗြ။
ကြုပျမှာတော့ ငုတျတုတျကွီးမနေ့ရေတာ။အဲ..တဈခုတော့ရှိတယျ။အခုအခါ မွနျမာပွညျလှတျတျောမြားထဲ ဘကြိုငျးကွီး ထိုငျနတေဲ့အခါ ဗဟုသုတမြိုးစုံ၊ စကားပွောနညျးမြိုးစုံ၊ စကားလုံးဝေါဟာရ ဖှငျ့ဆိုခကျြမြိုးစုံတော့ ပညာရသဗြာ။ဟိုတနကေ့ ကွားလိုကျကဲ့လား။ပငျလယျရပွေငျကို ရလေုပျသားတှမေပိုငျ .. ရငေံပိုငျဦးရှငျကွီးသာ ပိုငျတယျဆိုတဲ့ အဆိုလေ။ဒီကိစ်စ ဟိုးလေးတကွျောဖွဈတော့ .. ဘကြိုငျးကွီးတောငျ ဒီအမတျမငျးစကားကိုကွားတော့ ရယျခငျြမိသှားသေး။ရှမှေီ့နောကျမှီ ဘကြိုငျးကွီးဆိုတော့ ဟိုး ၁၉၂၈ ခုနှဈက အင်ျဂလိပျခတျေမှာဖွဈခဲ့တဲ့ အမှုတဈခုကို သှားသတိရမိလိုကျသေးတယျ။
အဲ့ဒီတုနျးက ရနျကုနျ ဒီစတွိတျမှာ မောရဈကောလဈ ဆိုတဲ့ စာရေးဆရာကွီးက တရားသူကွီးလုပျနခြေိနျပေါ့။ပုလိပျအဖှဲ့က ကိုသာစု ဆိုတဲ့ လူကို ပုဒျမ ၁၀၉ ၁၁၀ နဲ့ ဖမျးပွီး ရုံးတငျလာတယျ။၁၀၉ ၁၁၀ ဆိုတာ အဲ့ဒီခတျေက အလုပျမရှိအကိုငျမရှိ အခွအေနမေဲ့တှကေို ခွခြေုပျထားတဲ့ ဥပဒပေေါ့။အခုခတျေလို ဘာဖွဈဖွဈ ဘယျနရောဖွဈဖွဈ နရောတကာ ဝငျလုပျခငျြနတေဲ့သူတှကြေ ဘာပုဒျမမြား တပျကွမလဲမသိဘူး။ကဲ..ထားပါတော့။ကိုသာစု ကို မောရဈကောလဈကွီးက စဈမေးတော့ ကိုသာစု က သူ့မှာ အလုပျရှိပါတယျ။သူ့အလုပျက ဦးရှငျကွီး နတျတငျဆရာရဲ့ လကျထောကျပါတဲ့လေ။မွနျမာပါးဝလှပါခညျြရဲ့ဆိုတဲ့ မောရဈကောလဈကွီးတောငျ ဒီရာထူးမကွားဖူးလတေော့ သူ့စကားကို ထောကျခံပေးမယျ့ သူ့ဆရာ ဦးရှငျကွီး တငျတဲ့သူကို သကျသဆေငျ့ချေါရတယျ။ဦးရှငျကွီးနတျအကွောငျးမေးတော့ နတျတငျဆရာက ဦးရှငျကွီး ဆိုတာ ရငေံပိုငျနတျဖွဈကွောငျး၊ ရငေံနဲ့ဆကျစပျနတေဲ့ ဒသေတှကေ ကိုးကှယျကွကွောငျး ဖွတေယျ။ဟုတျပွီ။ဒီတော့ ဒီရနျကုနျနဲ့ ဦးရှငျကွီးနတျနဲ့ ဘာဆိုငျလို့ မောငျမငျးတို့က ဒီမှာ ဦးရှငျကွီးလာတငျနရေတာတုနျးဆိုတော့ နတျတငျဆရာက ဖွပွေနျတယျ။လှနျခဲ့တဲ့ နှဈ (၂၀) က သူဟာ ကြှနျးညိုကွီးမှာ နကွေောငျး၊ တဈရကျမှာ ဦးရှငျကွီးနတျကှနျးကို သှားပသတုနျး ဦးရှငျကွီး က ဝငျပူးပွီး သူ ရနျကုနျပွောငျးခငျြပွီလို့ အမိနျ့ရှိသတဲ့။ကြှနျးညိုကွီးမှာက လူနညျးပွီး ရနျကုနျမှာက လှသေမား၊ သင်ျဘောသားတှေ မြားလာလို့ ဦးရှငျကွီးက သူတို့ကို စောငျ့ရှောကျရငျ သူတို့ကလညျး ဦးရှငျကွီး ကို ပိုပသကွမှာလို့ ပွောတဲ့အတှကျ သူတို့ ဆရာတပညျ့နှဈယောကျဟာ ဦးရှငျကွီး ကို ပငျ့ပွီး ရနျကုနျမှာ နတျကှနျးဆောကျ ပွောငျးရှပေ့ေးခဲ့ကွောငျး၊ ဦးရှငျကွီး ကလညျး သူ့မားကကျတငျးဈေးကှကျကို ခြဲ့ထှငျပေးတဲ့ သူတို့ ဆရာတပညျ့ကို ရနျကုနျ ဒီစတွိတျရဲ့ နတျဆရာအဖွဈ ခနျ့ခဲ့တယျလို့ ထှကျဆိုသတဲ့လေ။အဲ့ဒီမှာ မောရဈကောလဈ လညျး ဘာမှမတတျနိုငျတော့ဘူး။ဦးရှငျကွီး ကိုပါ ချေါပွီး သကျသစေဈရမလို ဖွဈနပွေီလေ။ပွီးတော့ ဒီ ကိုသာစု ဟာ ဦးရှငျကွီးနတျတငျရာကနေ ကိုယျပိုငျဝငျငှလေညျး ရှိနတေော့ အမှုကနေ ကှငျးလုံးကြှတျ လှတျလိုကျရသတဲ့။
ကြုပျကတော့ ဒီအကွောငျးကိုတှေးမိပွီး ဒီအမတျမငျးတော့ ကိုသာစု တို့ ဆရာတပညျ့ကို အားကတြယျထငျရဲ့လို့ တှေးပွီးပွုံးမိတာပါ။နောကျတော့ .. အဲ့ဒီလို မဟုတျဘူးတဲ့ဗြာ။အဲ့ဒီအမတျမငျးပွောတဲ့ ဦးရှငျကွီး ဆိုတာ မွနျမာ့ပငျလယျပွငျမှာ ပငျလယျနဲ့စပျဆကျ လုပျစားတဲ့လူတှအေားလုံး မဖွဈမနပေသရတဲ့ နောကျပျေါ နတျကွီးတဈပါးကို ပွောတာတဲ့။မိကြောငျးစီးတဲ့ ဦးရှငျကွီး မဟုတျဘူးတဲ့။သင်ျဘောစီးတဲ့ ဦးရှငျကွီးတဲ့။သိမွငျသုတကွှယျဝတဲ့သူတှကေ ဆိုကွပွောကွတော့မှ ကြုပျ ဦးကြိုငျးကွီးလညျး မကျြစိလေးမှေးပွီး စဉျးစားကွညျ့မှ အျော ဦးရှငျကွီး ဆိုတာ ဦးရှငျကွီး ကို ပွောတာပါလားဆိုပွီး တရေးရေးပျေါလာတာပေါ့။အဲ .. ဘယျဦးရှငျကွီးလဲ မမေးပါနဲ့။ရလေုပျသားတှေ ပသရတယျဆိုတဲ့ ခတျေပျေါ ဦးရှငျကွီး လို့ပဲ မှတျကွပေါ့ဗနြော့။
ဟော့ … အနျကယျလျရှငျကိစ်စ ဟော့နရှေော့နတေုနျး .. နောကျတဈမှု ထပျကွားပွနျသဗြာ။ဒါကတော့ ဘကွီးကြိုငျးတို့ လှတျတျောထဲက ညီညာထကွှ လိမ်မာလှတဲ့ အမတျသငျးလေးတှေ ပွောတာပါ။ဘာတဲ့ … ပွညျပနဲ့ တိုကျနတောမဟုတျပဲ ပွညျတှငျးခငျြး တိုကျနတောမို့ စဈပှဲလို့မချေါပဲ တိုကျပှဲလို့ ပွောငျးချေါပေးပါတဲ့လေ။
အလို .. ဘကွီးကြိုငျး ခေါငျးစားပွီ။တဈသကျနဲ့တဈကိုယျ ဒီလှတျတျောအဆကျဆကျ ငုတျတုတျကွီး ငိုကျလာတာ ဒါမြိုး အခုမှကွားဖူးတော့တယျ။မှတျသားဖှယျရာပါဟဲ့။ပွညျပနဲ့တိုကျမှ စဈပှဲလို့ချေါရမတဲ့။ပွညျတှငျးမှာ အခငျြးခငျြးခတြော့ တိုကျပှဲတဲ့။
ဘကွီးကြိုငျး အတှေးတှေ အခုမှ မီးသီးပှငျ့သှားပွီလကှယျ။ဟုတျတာပေါ့။ပွညျပနဲ့တိုကျမှ စဈပှဲလို့ချေါရမယျဆို ဘကွီးကြိုငျးတို့ ရှမွေနျမာနိုငျငံကွီးမှာ စဈပှဲဆိုတာ ဘယျရှိတော့မလဲ။အခငျြးခငျြးဂြိနျးနတေဲ့ တိုကျပှဲတှပေဲ ရှိတော့မပေါ့။ဒီအကွောငျးကို ဟိုရပျပါအမတျမငျးက ရေးတာလေး ဘကွီးကြိုငျး သဘောကမြိသကှယျ။ဘာတဲ့ ပွညျတှငျးအခငျြးခငျြး တိုကျတဲ့ပှဲထဲ ထှကျပွေးနတေဲ့ ပွညျသူတှကေို တိုကျဘေးရှောငျဒုက်ခသညျပေါ့တဲ့။ဒါပေါ့ .. ဘကွီးကြိုငျးက ထပျဖွညျ့ပေးမယျ။ပွညျတှငျးအခငျြးခငျြး တိုကျတဲ့ဗြူဟာတှကေို တိုကျဗြူဟာ၊ တိုကျဆငျရေး၊ ပွညျတှငျးအခငျြးခငျြး တိုကျတဲ့နရောတှကေို တိုကျမွပွေငျ၊ ပွညျတှငျးမှာ တိုကျတဲ့သူတှကေို တိုကျဗိုလျ၊ တိုကျသား။ပွညျတှငျးအခငျြးခငျြးတိုကျပွီး အနားယူသှားတဲ့သူတှကေို တိုကျမှုထမျးဟောငျး။နောကျထပျ တိုကျတက်ကသိုလျ၊ တိုကျသငျတနျးကြောငျး၊ တိုကျသမိုငျးပွတိုကျ၊ တိုကျအငျဂငျြနီယာ၊ တိုကျဆရာဝနျ၊ တိုကျဆေးရုံ .. အငျး .. အငျး .. တပုံကွီးပဲရယျ။
ဟဲ့ .. ဒီလိုဆို သမိုငျးထဲက အချေါအဝျေါတှပေါ ဘယျနှယျ့လုပျရမလဲ .. ဘကွီးကြိုငျး တှေးတယျ။အငျးဝ၊ ဟံသာဝတီ နှဈလေးဆယျစဈပှဲဟာ အခငျြးခငျြးခကြွတာမို့ နှဈလေးဆယျတိုကျပှဲလို့ ပွောငျးချေါရမလား။အခု အခငျြးခငျြးခခြဲ့တဲ့ နှဈပေါငျးငါးဆယျကွာ အတှအေ့ကွုံတှကေိုရေးရငျ တိုကျသားဘဝ အမှတျတရမြားလို့ ခေါငျးစဉျတပျမှာလား။
ရဒေီယိုအစီအစဉျတှမှောလညျး ရှတေ့နျးရောကျ တိုကျသညျတျောမြားအတှကျ တိုကျတေးမြားဆိုပွီး လှငျ့မလား။ငါ့သားမြား တိုကျထဲဝငျရငျလတေို့၊ အခဈြနဲ့တိုကျမှာ မတရားတာမရှိတို့ ဆိုပွီး စကားပုံတှပွေောငျးကွမလား။
ဟော့ .. ရုပျရှငျကားနာမညျတဈခုလညျး ပွောငျးရမယျ။တိုကျပှဲချေါသံဆိုတဲ့ ဇာတျကား။အဲ့ဒီဇာတျကားက အင်ျဂလိပျတှနေဲ့ တို့ဗမာအစညျးအရုံး တိုကျပှဲအကွောငျးဆိုတော့ အခငျြးခငျြးခတြာမဟုတျဘူး။ဒီတော့ စဈပှဲချေါသံလို့ ပွောငျးချေါရမလား။ဟိုအရငျ စဈပှဲတှရေပျလို့ ဆန်ဒပွသူတှကေလညျး အခငျြးခငျြးခနြတေဲ့ ပှဲတှဆေိုတော့ တိုကျပှဲတှရေပျလို့ ဗီနိုငျးတှေ ပွောငျးရိုကျရမလား။
အိမျး…ဘကွီးကြိုငျး ပညာတှလေညျး ရပါတယျကှယျ။တခါတခါ စိမျးစိမျးကလေးတှေ ထရနျတှရေ့ငျ ဘကွီးကြိုငျးမှာ ရငျဖိုရမလို ရငျတုနျရမလိုလညျး ကွုံရသေး။
ဟော့ဒီ … လှတျတျောကွီးထဲ … ထိုငျငိုကျရငျး .. ဘကွီးကြိုငျးဟာ ပညာရှိဖွဈလာတာလညျး မပွောနဲ့။တျောကွရှာတာကိုးကှဲ့။တျာကွရှာတာကိုး။
စကျတငျဘာ - ၂၂
ခင်ဗျားတို့ ကျုပ်ကိုသိကြရဲ့လား။သိတော့ သိမှာပါဗျာ။နာမည်နဲ့ မတွဲမိတာပဲနေမယ်။လွှတ်တော်ချန်နယ်တွေ ဘာတွေ ကြည့်တဲ့သူတွေကတော့ ကျုပ်သိကြမှာပါ။
အော်..ဟုတ်ပါရဲ့။ကျုပ်နာမည် မိတ်ဆက်ပေးဖို့ မေ့နေတာရယ်။တော်ကြာ တကျုပ်ကျုပ်နဲ့ ပြောနေလို့ ဖေ့စဘွတ်ဆိုတာမယ် တရားတွေလိုက်စွဲပြီး နာမည်ကြီးနေတဲ့ ဟိုဆရာမလေး ထင်နေပါဦးမယ်။ကျုပ်နာမည် ဘကြီးကျိုင်းတဲ့ဗျ။
ငါတို့များလည်း လွှတ်တော်ချန်နယ်၊ လွှတ်တော်သတင်းတွေ အမြဲကြည့်၊ အမြဲဖတ်ပါတယ်ကွယ်။ဘကျိုင်းကြီးဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ လွှတ်တော်အမတ်များ ကြားကြားဖူးပေါင်ဗျာ။ဒါနဲ့ဘာလဲ .. ဘောင်းဘီဝတ်အမတ်တွေထဲကလားလို့တော့ မမေးလိုက်ပါနဲ့။ဘကြီးကျိုင်းက ဟိရိဩတ္တပတရားနဲ့ ပြည့်စုံပါတယ်။လွှတ်တော်ထဲ ဘောင်းဘီမဝတ်ပါဘူး။
အိုဟဲ့..တမျိုးမထင်ပါနဲ့။ဒီအသက်အရွယ်ကြီးမှ ဘောင်းဘီကြီးတကားကားနဲ့ဆို ဘကျိုင်းကြီးက ရှက်တတ်လို့ပါကွဲ့။ကဲ..ဟုတ်ပါပြီ။ဘကြီးကျိုင်းဆိုတာကို လွှတ်တော်ထဲ မမြင်ဘူး၊ မသိဘူးကြသူများကို ဘကျိုင်းကြီးကပဲ မိတ်ဆက်ပေးပါ့မယ်။ဘကြီးကျိုင်းဟာ လွှတ်တော်ထဲမှာ အကောင်ကွယ့်။ဘကြီးကျိုင်းလာပြီဆို ရောင်စုံအမတ်တွေအကုန်လုံး မတ်တပ်ရပ်နေကြရတာ။ဘကြီးကျိုင်း နောက်မှာမှ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌက လိုက်ရတာ။အောင်မယ် .. ဘကြီးကျိုင်း လွှတ်တော်ထဲဝင်ရင်လည်း သူများတကာ အမတ်တွေလို လမ်းလျှောက်ဝင်ရတာ မဟုတ်ဘူး။တစ်ယောက်က ထမ်းသွားရတာမောင်။ကိုင်း .. ဒီလောက်ဆို ကျုပ် ဘကြီးကျိုင်းဟာ ဘယ်သူဆိုတာ ခင်ဗျားတို့ သိလောက်ရောပေါ့။
ဒါပေသိ .. ဒီအချက်တွေကိုကြည့်ပြီး . ဘကြီးကျိုင်းဆိုတဲ့ ခင်ဗျားကြီးက လွှတ်တော်ထဲ တယ်ဇိမ်ကျနေမယ်ဆိုပြီးတော့ မတွေးကြပါနဲ့ဗျာတို့။ကျုပ်မယ် တစ်နေ့ တစ်နေ့ လွှတ်တော်ကြီးထဲက အချွတ်အချော်တွေကို ထိုင်ကြည့်နေရတာ ဘယ်လောက်ဒုက္ခများတယ်ထင်တုန်း။သူများတွေက ဒီဒုက္ခကြီးခံရတာကို ဆယ်သိန်းစားရတယ်ဗျ။
ကျုပ်မှာတော့ ငုတ်တုတ်ကြီးမေ့နေရတာ။အဲ..တစ်ခုတော့ရှိတယ်။အခုအခါ မြန်မာပြည်လွှတ်တော်များထဲ ဘကျိုင်းကြီး ထိုင်နေတဲ့အခါ ဗဟုသုတမျိုးစုံ၊ စကားပြောနည်းမျိုးစုံ၊ စကားလုံးဝေါဟာရ ဖွင့်ဆိုချက်မျိုးစုံတော့ ပညာရသဗျာ။ဟိုတနေ့က ကြားလိုက်ကဲ့လား။ပင်လယ်ရေပြင်ကို ရေလုပ်သားတွေမပိုင် .. ရေငံပိုင်ဦးရှင်ကြီးသာ ပိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အဆိုလေ။ဒီကိစ္စ ဟိုးလေးတကြော်ဖြစ်တော့ .. ဘကျိုင်းကြီးတောင် ဒီအမတ်မင်းစကားကိုကြားတော့ ရယ်ချင်မိသွားသေး။ရှေ့မှီနောက်မှီ ဘကျိုင်းကြီးဆိုတော့ ဟိုး ၁၉၂၈ ခုနှစ်က အင်္ဂလိပ်ခေတ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ အမှုတစ်ခုကို သွားသတိရမိလိုက်သေးတယ်။
အဲ့ဒီတုန်းက ရန်ကုန် ဒီစတြိတ်မှာ မောရစ်ကောလစ် ဆိုတဲ့ စာရေးဆရာကြီးက တရားသူကြီးလုပ်နေချိန်ပေါ့။ပုလိပ်အဖွဲ့က ကိုသာစု ဆိုတဲ့ လူကို ပုဒ်မ ၁၀၉ ၁၁၀ နဲ့ ဖမ်းပြီး ရုံးတင်လာတယ်။၁၀၉ ၁၁၀ ဆိုတာ အဲ့ဒီခေတ်က အလုပ်မရှိအကိုင်မရှိ အခြေအနေမဲ့တွေကို ခြေချုပ်ထားတဲ့ ဥပဒေပေါ့။အခုခေတ်လို ဘာဖြစ်ဖြစ် ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ် နေရာတကာ ဝင်လုပ်ချင်နေတဲ့သူတွေကျ ဘာပုဒ်မများ တပ်ကြမလဲမသိဘူး။ကဲ..ထားပါတော့။ကိုသာစု ကို မောရစ်ကောလစ်ကြီးက စစ်မေးတော့ ကိုသာစု က သူ့မှာ အလုပ်ရှိပါတယ်။သူ့အလုပ်က ဦးရှင်ကြီး နတ်တင်ဆရာရဲ့ လက်ထောက်ပါတဲ့လေ။မြန်မာပါးဝလှပါချည်ရဲ့ဆိုတဲ့ မောရစ်ကောလစ်ကြီးတောင် ဒီရာထူးမကြားဖူးလေတော့ သူ့စကားကို ထောက်ခံပေးမယ့် သူ့ဆရာ ဦးရှင်ကြီး တင်တဲ့သူကို သက်သေဆင့်ခေါ်ရတယ်။ဦးရှင်ကြီးနတ်အကြောင်းမေးတော့ နတ်တင်ဆရာက ဦးရှင်ကြီး ဆိုတာ ရေငံပိုင်နတ်ဖြစ်ကြောင်း၊ ရေငံနဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့ ဒေသတွေက ကိုးကွယ်ကြကြောင်း ဖြေတယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒီတော့ ဒီရန်ကုန်နဲ့ ဦးရှင်ကြီးနတ်နဲ့ ဘာဆိုင်လို့ မောင်မင်းတို့က ဒီမှာ ဦးရှင်ကြီးလာတင်နေရတာတုန်းဆိုတော့ နတ်တင်ဆရာက ဖြေပြန်တယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် (၂၀) က သူဟာ ကျွန်းညိုကြီးမှာ နေကြောင်း၊ တစ်ရက်မှာ ဦးရှင်ကြီးနတ်ကွန်းကို သွားပသတုန်း ဦးရှင်ကြီး က ဝင်ပူးပြီး သူ ရန်ကုန်ပြောင်းချင်ပြီလို့ အမိန့်ရှိသတဲ့။ကျွန်းညိုကြီးမှာက လူနည်းပြီး ရန်ကုန်မှာက လှေသမား၊ သင်္ဘောသားတွေ များလာလို့ ဦးရှင်ကြီးက သူတို့ကို စောင့်ရှောက်ရင် သူတို့ကလည်း ဦးရှင်ကြီး ကို ပိုပသကြမှာလို့ ပြောတဲ့အတွက် သူတို့ ဆရာတပည့်နှစ်ယောက်ဟာ ဦးရှင်ကြီး ကို ပင့်ပြီး ရန်ကုန်မှာ နတ်ကွန်းဆောက် ပြောင်းရွှေ့ပေးခဲ့ကြောင်း၊ ဦးရှင်ကြီး ကလည်း သူ့မားကက်တင်းဈေးကွက်ကို ချဲ့ထွင်ပေးတဲ့ သူတို့ ဆရာတပည့်ကို ရန်ကုန် ဒီစတြိတ်ရဲ့ နတ်ဆရာအဖြစ် ခန့်ခဲ့တယ်လို့ ထွက်ဆိုသတဲ့လေ။အဲ့ဒီမှာ မောရစ်ကောလစ် လည်း ဘာမှမတတ်နိုင်တော့ဘူး။ဦးရှင်ကြီး ကိုပါ ခေါ်ပြီး သက်သေစစ်ရမလို ဖြစ်နေပြီလေ။ပြီးတော့ ဒီ ကိုသာစု ဟာ ဦးရှင်ကြီးနတ်တင်ရာကနေ ကိုယ်ပိုင်ဝင်ငွေလည်း ရှိနေတော့ အမှုကနေ ကွင်းလုံးကျွတ် လွှတ်လိုက်ရသတဲ့။
ကျုပ်ကတော့ ဒီအကြောင်းကိုတွေးမိပြီး ဒီအမတ်မင်းတော့ ကိုသာစု တို့ ဆရာတပည့်ကို အားကျတယ်ထင်ရဲ့လို့ တွေးပြီးပြုံးမိတာပါ။နောက်တော့ .. အဲ့ဒီလို မဟုတ်ဘူးတဲ့ဗျာ။အဲ့ဒီအမတ်မင်းပြောတဲ့ ဦးရှင်ကြီး ဆိုတာ မြန်မာ့ပင်လယ်ပြင်မှာ ပင်လယ်နဲ့စပ်ဆက် လုပ်စားတဲ့လူတွေအားလုံး မဖြစ်မနေပသရတဲ့ နောက်ပေါ် နတ်ကြီးတစ်ပါးကို ပြောတာတဲ့။မိကျောင်းစီးတဲ့ ဦးရှင်ကြီး မဟုတ်ဘူးတဲ့။သင်္ဘောစီးတဲ့ ဦးရှင်ကြီးတဲ့။သိမြင်သုတကြွယ်ဝတဲ့သူတွေက ဆိုကြပြောကြတော့မှ ကျုပ် ဦးကျိုင်းကြီးလည်း မျက်စိလေးမှေးပြီး စဉ်းစားကြည့်မှ အော် ဦးရှင်ကြီး ဆိုတာ ဦးရှင်ကြီး ကို ပြောတာပါလားဆိုပြီး တရေးရေးပေါ်လာတာပေါ့။အဲ .. ဘယ်ဦးရှင်ကြီးလဲ မမေးပါနဲ့။ရေလုပ်သားတွေ ပသရတယ်ဆိုတဲ့ ခေတ်ပေါ် ဦးရှင်ကြီး လို့ပဲ မှတ်ကြပေါ့ဗျနော့။
ဟော့ … အန်ကယ်လ်ရှင်ကိစ္စ ဟော့နေရှော့နေတုန်း .. နောက်တစ်မှု ထပ်ကြားပြန်သဗျာ။ဒါကတော့ ဘကြီးကျိုင်းတို့ လွှတ်တော်ထဲက ညီညာထကြွ လိမ္မာလှတဲ့ အမတ်သင်းလေးတွေ ပြောတာပါ။ဘာတဲ့ … ပြည်ပနဲ့ တိုက်နေတာမဟုတ်ပဲ ပြည်တွင်းချင်း တိုက်နေတာမို့ စစ်ပွဲလို့မခေါ်ပဲ တိုက်ပွဲလို့ ပြောင်းခေါ်ပေးပါတဲ့လေ။
အလို .. ဘကြီးကျိုင်း ခေါင်းစားပြီ။တစ်သက်နဲ့တစ်ကိုယ် ဒီလွှတ်တော်အဆက်ဆက် ငုတ်တုတ်ကြီး ငိုက်လာတာ ဒါမျိုး အခုမှကြားဖူးတော့တယ်။မှတ်သားဖွယ်ရာပါဟဲ့။ပြည်ပနဲ့တိုက်မှ စစ်ပွဲလို့ခေါ်ရမတဲ့။ပြည်တွင်းမှာ အချင်းချင်းချတော့ တိုက်ပွဲတဲ့။
ဘကြီးကျိုင်း အတွေးတွေ အခုမှ မီးသီးပွင့်သွားပြီလကွယ်။ဟုတ်တာပေါ့။ပြည်ပနဲ့တိုက်မှ စစ်ပွဲလို့ခေါ်ရမယ်ဆို ဘကြီးကျိုင်းတို့ ရွှေမြန်မာနိုင်ငံကြီးမှာ စစ်ပွဲဆိုတာ ဘယ်ရှိတော့မလဲ။အချင်းချင်းဂျိန်းနေတဲ့ တိုက်ပွဲတွေပဲ ရှိတော့မပေါ့။ဒီအကြောင်းကို ဟိုရပ်ပါအမတ်မင်းက ရေးတာလေး ဘကြီးကျိုင်း သဘောကျမိသကွယ်။ဘာတဲ့ ပြည်တွင်းအချင်းချင်း တိုက်တဲ့ပွဲထဲ ထွက်ပြေးနေတဲ့ ပြည်သူတွေကို တိုက်ဘေးရှောင်ဒုက္ခသည်ပေါ့တဲ့။ဒါပေါ့ .. ဘကြီးကျိုင်းက ထပ်ဖြည့်ပေးမယ်။ပြည်တွင်းအချင်းချင်း တိုက်တဲ့ဗျူဟာတွေကို တိုက်ဗျူဟာ၊ တိုက်ဆင်ရေး၊ ပြည်တွင်းအချင်းချင်း တိုက်တဲ့နေရာတွေကို တိုက်မြေပြင်၊ ပြည်တွင်းမှာ တိုက်တဲ့သူတွေကို တိုက်ဗိုလ်၊ တိုက်သား။ပြည်တွင်းအချင်းချင်းတိုက်ပြီး အနားယူသွားတဲ့သူတွေကို တိုက်မှုထမ်းဟောင်း။နောက်ထပ် တိုက်တက္ကသိုလ်၊ တိုက်သင်တန်းကျောင်း၊ တိုက်သမိုင်းပြတိုက်၊ တိုက်အင်ဂျင်နီယာ၊ တိုက်ဆရာဝန်၊ တိုက်ဆေးရုံ .. အင်း .. အင်း .. တပုံကြီးပဲရယ်။
ဟဲ့ .. ဒီလိုဆို သမိုင်းထဲက အခေါ်အဝေါ်တွေပါ ဘယ်နှယ့်လုပ်ရမလဲ .. ဘကြီးကျိုင်း တွေးတယ်။အင်းဝ၊ ဟံသာဝတီ နှစ်လေးဆယ်စစ်ပွဲဟာ အချင်းချင်းချကြတာမို့ နှစ်လေးဆယ်တိုက်ပွဲလို့ ပြောင်းခေါ်ရမလား။အခု အချင်းချင်းချခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်းငါးဆယ်ကြာ အတွေ့အကြုံတွေကိုရေးရင် တိုက်သားဘဝ အမှတ်တရများလို့ ခေါင်းစဉ်တပ်မှာလား။
ရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေမှာလည်း ရှေ့တန်းရောက် တိုက်သည်တော်များအတွက် တိုက်တေးများဆိုပြီး လွှင့်မလား။ငါ့သားများ တိုက်ထဲဝင်ရင်လေတို့၊ အချစ်နဲ့တိုက်မှာ မတရားတာမရှိတို့ ဆိုပြီး စကားပုံတွေပြောင်းကြမလား။
ဟော့ .. ရုပ်ရှင်ကားနာမည်တစ်ခုလည်း ပြောင်းရမယ်။တိုက်ပွဲခေါ်သံဆိုတဲ့ ဇာတ်ကား။အဲ့ဒီဇာတ်ကားက အင်္ဂလိပ်တွေနဲ့ တို့ဗမာအစည်းအရုံး တိုက်ပွဲအကြောင်းဆိုတော့ အချင်းချင်းချတာမဟုတ်ဘူး။ဒီတော့ စစ်ပွဲခေါ်သံလို့ ပြောင်းခေါ်ရမလား။ဟိုအရင် စစ်ပွဲတွေရပ်လို့ ဆန္ဒပြသူတွေကလည်း အချင်းချင်းချနေတဲ့ ပွဲတွေဆိုတော့ တိုက်ပွဲတွေရပ်လို့ ဗီနိုင်းတွေ ပြောင်းရိုက်ရမလား။
အိမ်း…ဘကြီးကျိုင်း ပညာတွေလည်း ရပါတယ်ကွယ်။တခါတခါ စိမ်းစိမ်းကလေးတွေ ထရန်တွေ့ရင် ဘကြီးကျိုင်းမှာ ရင်ဖိုရမလို ရင်တုန်ရမလိုလည်း ကြုံရသေး။
ဟော့ဒီ … လွှတ်တော်ကြီးထဲ … ထိုင်ငိုက်ရင်း .. ဘကြီးကျိုင်းဟာ ပညာရှိဖြစ်လာတာလည်း မပြောနဲ့။တော်ကြရှာတာကိုးကွဲ့။တ်ာကြရှာတာကိုး။
စက်တင်ဘာ - ၂၂
【 သရျောစာ 】 “ ဆောငျးရယျ..တဈသောငျးရယျ..ကိုယျ့ခဈြသူရယျ”
【 သရျောစာ 】"တို့ဆေးနဲ့ ချေါလိုကျမယျနျော"
【 သရျောစာ 】 အိမျကှငျး အဝေးကှငျး စီမံကိနျး
【 သရျောစာ 】“ ဘာဖွဈဖွဈ….လျောမယျ ”